5 herinandro ny fitoriana filazantsara amin'ny MAY 2020
AHOANA NO AHAFAHANAO MANDRAY ANJARA?
Miaraha mivavaka amin’ireo Kristiana an-tapitrisany amin’ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny volana May. Ataovy avokoa ireo karazana hetsika ara-pilazantsara rehetra mandritra ny volana May manontolo.
dia mahatratra 5 olona izy
Zarao amin’ny namana, mpiray monina, mpiara-miasa, ary fianakaviana ny Filazantsara. Aoka ianao mba hanaraka ireo toromarika momba ny corona izay omen’ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanajana ny fifanalavirana. Afaka manolotra vavaka ianao, miahy ireo olona sy ny filàny ary mizara ny finoanao amin’ny tambajotra sosialy, telefaona, mailaka, ary amin’ny toerana afaka ifaneraserana manokana. Ny fijoroanao vavolombelona dia afaka manova fiainana mandrakizay!
REHEFA VOA NY FIVAVAHANA REHETRA MBOLA MAHAY NY ZAVATRA TOKONY HAFA
Mandritra ny fotoana fifanalavirana, ianao dia afaka mizara ny Filazantsara amin’ny tambajotra-tserasera, manao hetsika ara-evanjelika mivantana, na fihaonan’ny vondrona madinika. Ianao ihany koa dia afaka manolotra fiofanana momba ny finoana amin’ny tambajotra-tserasera, mandefa mailaka fampaherezana samihafa amin’ny olona, mizara ny Vaovao Mahafaly amin’ny tambajotra sosialy, ary manampy ny olona. Ataovy izay rehetra mifanaraka amin’ny toerana misy anao. Mizàra an’i Kristy anatin’ny olana.
Azafady mba ampahafantaro ny pasitera, fiangonana ary mpino hafa ny amin'ny GO 2020.
Zarao ny fijoroanao ho vavolombelona momba ny media sosialy amin'ny alàlan'ny #globaloutreach # go2020
MIALOHAN’NY VOLANA MAY
MIVAVAHA mba hisy olona maro ho voavonjy. HETSEHO ary AMPIOFANO ho amin’ny fitoriana manokana (Fiofanana arahina DINGANA 3) ny mpino rehetra.
Ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny May: Miaraha mivavaka amin’ireo mpino 100 tapitrisa, alefaso ny fiangonanao.
Ny volana May: Hetsika ara-evanjelika samihafa, indrindra amin’ny tambajotra-tserasera.
30 May 2020: Mizara momba an’i Jesosy avokoa ny mpino rehetra mandritra ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara.
ATAOVY MPIANATRA ireo mpino vaovao ary ataovy tafiditra tsara ao amin’ny fiangonanao, manangana vondrona kely sy fiangonana vaovao.
Tohizo ny fizarana ny Filazantsara:
31 Oktobra – 1 Novambra 2020:
Faran’izay miavaka! Nohon’ny amin’ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara dia nitombo olona 2.300 ireo fiangonana 300. Ankehitriny dia maro aminay no mandeha eny ivelany mba hizara ny Filazantsara tsy tapaka.
VAVOLOMBELONA NY MPINO REHETRA – AFAKA MANATRATRA IZAO TONTOLO IZAO ISIKA RAHA MIARAKA!